Kevin De Bruyne oo hoggaaminaya xiddigaha caawinta ugu badan illaa iyo haatan ka sameeyey horyaalka Premier League – Gool FM
(England) 23 Sebt 2019. Kulamadii 6-aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2019-20 ayaa la ciyaaray, iyadoo uu hoggaanka gool caawinta horyaalka la wareegay laacibka khadka dhexe ee kooxda Manchester City, Kevin De Bruyne kaasoo leh 7 caawin.
Xiddiga xulka qaranka Belgium ee Kevin De Bruyne ayaa ciyaartoyda kale ee ka ciyaara horyaalka Premier League waxa uu ka sarreeyaa saddex caawin.
Emi Buendía oo ka tirsan kooxda Norwich City iyo David Silva oo ka mid ah kooxda Manchester City ayaa ku soo xiga De Bruyne kuwaasoo leh min afar gool caawin.
Ciyaaryahanka Kooxda Man City ee Riyad Mahrez iyo labada ciyaaryahan ee naadiga Liverpool Roberto Firmino & Mohamed Salah ayaa gool caawinta horyaalka Premier League hoos ka hoggaaminaya waxaana ay leeyihiin min saddex caawin.
Haddaba halkaan hoose ka eeg lixda ciyaaryahan ee ugu sarreeya haatan gool caawinta horyaalka Premier League illaa haatan:-